Investment Kukanda uye Mechanical Kugadzira -Retool
Chikafu Machina Zvikamu
Chiwanikwa Simbi Zvikamu
Pamusoro Kurapa Zvikamu
Kambani yeRetool ine makore angangoita makumi maviri nematanhatu neruzivo mukukanda nemazvo Izvo zvinounza iwe sarudzo, nyore, uye yemakwikwi mutengo.
Retool Kambani inosimbirira kusimudzira kwesainzi sekusimudzira, kunaka uye kufarira sechinhu chinobva kumberi. Isu tanga tichitsvaga yakanakisa kumira kwechikwereti, yepasi rose mhando uye premium sevhisi. Isu tinoshuvira nemoyo wese kushandira pamwe nekune dzimwe nyika uye shamwari dzekumba uye tinogadzira ramangwana rakanaka.
Tinogona kukanda uye muchina mhando dzakasiyana dzezvigadzirwa zvinoenderana nemifananidzo kana sampuli vatengi vanopa.Kukanda kunyatso kukwirira, uye mhando yakatsiga
Retool Kambani ishamwari yakavimbika muindasitiri yekurasa. Isu tinoshandisa kuvimba uku uye tinoshandisa ruzivo rwedu kuti tienzane nezvinodiwa pakurasa. Mainjiniya edu ane ruzivo muzvikamu zvese zveiyo indasitiri yekukanda. Isu tinogara tichipa iyo yepamusoro pehunhu uye isu tinonyatso kudzora maitiro ese ekugadzira zvinoenderana ne ISO9001.
Screw YeNyama Grinder Machinery
Shijiazhuang Retool Stainless Simbi Zvigadzirwa Co., Ltd.iri mubatanidzwa bhizinesi rebhizimisi, rakagadzwa muna 1994.Retool locates muXinzhaidian Industry Area, Shijiazhuang guta, pamwe nyore zvifambiso uye nani nzvimbo. Retool Kambani inogadzira dhizaini uye kugadzirwa kwemarudzi ese evhavha uye kugadzirwa kwenzvimbo dzekudyara zvikamu uye michina zvikamu.
Kwete. 3 Mingzhu Road, Xinzhaidian Industry Area, Zhaoxian, Shijiazhuang, China